Ukuvota - Ibhodi eliyisicaba noma ibhokisi le-Resonance? – General – Kalimba Forum
Ikhasi 1 / 2 1 2 Olandelayo
Iyiphi oyithandayo? Kungani?
Isiqalo sesihloko Kuthunyelwe: 13/12/2020 1:38 am
Mills, Jenna futhi KalimbaVerse ithandiwe
flatboard ibhokisi le-resonance ukukhetha komuntu
Udumile uKalimbist Kubhaliswe
Nakuba ithule ngaphandle kwebhokisi lomsindo, umsindo ewukhiphayo uthi dolce/bushelelezi/umnandi, futhi mancane amathuba okuba ubhekane nezinkinga ezifana namathambo afile/isidumbu/izinhlamvu ezikhalayo ezenzeka ngezinye izikhathi ezigodini 😆
Kuthunyelwe: 15/12/2020 1:12 am
Mills, Jenna futhi Nataliya ithandiwe
@kalimbaverse ngakho ukuqaqa ibhodi eliyisicaba bese ubeka leyo hardware ebhokisini, ingabe lokho kungaba okungcono kakhulu kwakho kokubili?
Ngathenga amathini ashibhile ku-Wish futhi ngakha i-kalimba ebhokisini likagwayi. Lalifile futhi lingenawo umxhaso. Ngakuhlukanisa lokho ngase ngibeka i-hardware ocezwini oluqinile lwe-oki. Inokusekela okwengeziwe, kodwa amanye amathambo asafile. I-E° yaphuka lapho ngiqala ukuyakha ebhokisini likagwayi.
Ngicabanga ukuthi ibhokisi elingenalutho elingaphezulu eliwugqinsi ngokwanele lingasebenza. Kubukeka kungahambisani nokuvela ensimbini enezintambo ukuze kube nebhodi lomsindo eliwugqinsi.
Kuthunyelwe: 17/12/2020 6:19 am
Nginayo eyodwa kuphela, uhlobo lwebhokisi elizwakalayo. Okokuqala kalimba ngike ngadlala futhi ngiyayithanda!
Kubhalwe: 19/12/2020 9:42 pm
Okwamanje, ibhodi eliyisicaba, njengoba kusejwayelekile ukuthi ama-kalimba angenalutho abe nemigqa eqinile noma efile ene-resonance encane kanye nethoni enamathela kuwo wonke amanothi.
Kubhalwe: 29/12/2020 4:25 pm
Ngenze ucwaningo oluningi ngaphambi kokuthola olwami lokuqala, ngathola ibhokisi elingenalutho/resonance kalimba. Ngesizathu esithile, ngicabanga ukuthi bekungcono futhi kubukeka njengensimbi "yangempela" yomculo. Kodwa-ke, kusukela lapho nginqume ukuthi ngithanda i-flat board kalimbas kangcono. Ngiyathanda ukukwazi ukudlala amanothi aphezulu. Kimina, akusho lutho ukuthi akunomsindo kangako. Kunezimo ezithile lapho othile angathanda khona engenalutho kangcono, njengokukhiqiza imithelela ekhethekile ngezimbobo zomsindo. Ngicabanga ukuthi bobabili banokuhle nokubi, kuye ngomsindo oya kuwo! 🙂
Kubhalwe: 29/12/2020 8:10 pm
I-Ookami futhi Nataliya ithandiwe
@ookami Ibhokisi lami elingenalutho linamandla kakhulu ngaphandle kwezinhlamvu ezifile, nokho lalishibhile elivela e-Amazon. Ngicabanga ukuthi ngibe nenhlanhla.
Kuthunyelwe: 30/12/2020 2:04 am
kalimba_bee, I-Ookami futhi Nataliya ithandiwe
@syabongampungos, yebo, lokho kuhle kuwe 👍 :). Kuhle kukhona okuhlukile, njengoba lokhu kusho ukuthi kunethemba lentuthuko nokuthi okuhlukile kuyasebenza ukuze kube isilinganiso. Amanye amabhrendi noma/kanye nezinhlobo zokhuni zibonakala zingathandeki kakhulu kuwo.
Angiwashiyi amabhokisi angenalutho ngokuhamba kwesikhathi, ngilinde ukuthi kuphume elilodwa elizonqoba ngokuthembekile lezi zinkinga ezijwayelekile 😉 ( ukubeka iso kuzibuyekezo/imibiko/amakhava amaningi adlalwa kumamodeli ahlukene).
Emakethe engiyitholayo, izimbobo ezishibhile azishibhile kangako, uma ziqhathaniswa nebhodi eliyisicaba (ukhuni noma i-acrylic). Futhi nginezinye izici ezimbalwa, ezifana nezihluthulelo ezihlukahlukene (21), izihluthulelo ezithambile futhi kulula ukuzikha (ikakhulukazi eziphethweni eziphakeme) (isikhumba esizwelayo nezinzipho ezimfushane 😆 ), uhlobo lomsindo ophumayo (okunzima ukuwuqonda). chaza, kuya kokuthandwa nguwe futhi kuvame ukucaciswa ngomkhiqizo/imodeli). Amabhodi ayisicaba anikeza ukukhetha okwengeziwe ngokhiye abangu-21, angikhumbuli ocwaningweni lwami i-kalimba engenalutho enokhiye abangu-21. Lokho kuphinde kwaba neqhaza ekuthatheni ibhodi lokhiye abangu-21 njengeKalimba yami yokuqala, ebiza kakhulu kunezemboze zokuqala.
Kuthunyelwe: 30/12/2020 4:41 am
Kuthunyelwe: 30/12/2020 9:40 am
i-alpobc futhi Nataliya ithandiwe
Angikalitholi ithuba lokusebenzisa i-kalimba engenalutho. Ngesikhathi ngicwaninga ngaphambi kokuthenga i-kalimba yami yokuqala ngibonge kakhulu ngamavidiyo achaza umehluko, ngilungile ngokuphelele nge-kalimba engekho phezulu futhi umsindo omnandi we-flatboard yilokho engikuthandayo, ngakho ngithenge i-flatboard Lingting. Ukube angenzanga ucwaningo cishe ngabe ngithenge enye yama-kalimba ashibhile, angenalutho.
Kuthunyelwe: 30/12/2020 9:43 am
Ngaphambi kokuthi ngithole i-hollowboard yami yamanje umlingani wami oda ibhodi elincane le-flatboard lamanothi ayi-10 kusukela ekufisweni njengokumangala. Lafika kodwa lalingekho ibhodi. Isikhwama nje sezinhlamvu ezincane nezinsimbi lol. Ngingahle ngihlangane ngikuhlanganise ngolunye usuku...
Kuthunyelwe: 30/12/2020 11:32 am
@syabongampungos I-Wish yakudala haha ​​- ungazise uma udinga isiqondiso noma uma unemibuzo. Ngincoma ukuthi ufake ke ku-flatboard
Isiqalo sesihloko Kuthunyelwe: 30/12/2020 11:38 am
@ukhozi_fm yebo ngifuna into engingayisebenzisa njengebhodi eliyisicaba, futhi ngizodinga ukwazi ukuthi ngizowafaka kuphi amabha.
Kuthunyelwe: 30/12/2020 11:41 am
@syabongampungos zama ukuvakashela ababazi bendawo uthole ibhodi esele isesimweni. Ngizobona ukuthi ngingawathola yini amapulani ayo bese ngiwathumela lapha ngokuhamba kwesikhathi
Isiqalo sesihloko Kuthunyelwe: 30/12/2020 11:50 am
Bheka le vidiyo u-Larry - into eyodwa ebalulekile okufanele uyikhumbule lapho ufaka ama-tines
Isiqalo sesihloko Kubhalwe: 30/12/2020 1:03 pm
I-Ookami futhi GreenLarry ithandiwe